November 10, 2021 - Celegroup
ပုရစ်ကြော် အရမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်
November 10, 2021 Celegroup1975 0
ငါမသိဘဲ စားခဲ့မိတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ငရဲကြီးရှစ်ထပ်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာငရဲဘုံဆိုတာရှိပါတယ်။ သူတို့ ခံစားနေရတဲ့ ဝဋ်ဒုက္ခတွေဟာ လက်ရှိလူတွေ စားနေတဲ့ ပရစ်တွေရဲ့ ဘဝနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ပရစ်ကြော်ကို ကျွန်တော်လဲ အရင်ကအရမ်းကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ နယ်ပြန်တော့ ကြော်ပုံကြော်နည်းအဆင့်ဆင့်တွေကို သိလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်း လုံးဝမစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အရမ်းစားကောင်းတယ်၊ အရမ်းလတ်ဆက်တယ်ဆိုတာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးမှ သေရတာဖြစ်လို့ ပိုပြီး လက်ဆက် ပိုစားကောင်း ခံတွင်းမြိန်စေတာပါ။ ပရစ်ကို အရင်ဆုံး ရေသန့်ဗူးထဲ ကောက်ကောက်ထည့်ပါတယ်။ရေသန့်ဗူးထဲမှာ ရေအနည်းငယ်ထည့်ထားပါတယ်။ အဲတော့ […]
လူကြီးတွေ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ “ဧည့်သည်လာရင် ဆန် မကုန်စေနဲ့ကွတဲ့”။ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတုန်းက ဘယ်နဲ့စကားကြီးပါလိမ့်ပေါ့။ စကားရိုးသလောက် အဓိပ္ပါယ်အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ သိ့၊မသိ့ ဧည့်သည်လာရင် ပုန်းနေပြီး ထမင်းချက်မကြွေးပဲ ရှောင်နေရမယ် ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောင့်အီးပြီး ချက်ကြွေးရမယ်လို့လည်း ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊မကောင်းတတ်လို့ ချက်ကြွေးလိုက်ရတယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊လက်ကချက်ကြွေးပြီး စိတ်က မပါတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊မျက်နှာလုပ်ပြီး ချက်ကြွေးရခြင်းမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီလိုတွေပဲ တွေးတွေး လုပ်လုပ်ပြီး ချက်ကြွေး နေကြရင် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ […]
အသစ္စက္စက္ လက္ထပ္ထားတဲ့ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ဟာ မိဘေတြ လက္ဖြဲ႕ထားတဲ့ တထပ္တိုက္ေလးထဲက လက္ဖြဲ႕ေတြကိုစစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ေသာအခါ..
အသစ်စက်စက် လက်ထပ်ထားတဲ့ လင်မယား နှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့ထားတဲ့ တထပ်တိုက်လေးထဲက လက်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ.. အသစ်စက်စက် လက်ထပ်ထားတဲ့ လင်မယား နှစ်ယောက်ဟာ နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့ထားတဲ့ တထပ်တိုက်လေးထဲက လက်ဖွဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့်နေ ကြတယ် ။ နှစ်ဖက်မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းတွေဟာ အရမ်း ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေ ဖြစ်ကြလို့ လက်ဖွဲ့တွေကလည်း အဖိုးတန် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ များပါတယ် ။ နောက်ဆုံး လက်ဖွဲ့ […]
တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ ဖေဖေရယ် သမီးနောက်တခါ ဘုရားကို ဘယ်တော့မှထပ်မသွားချင်တော့ဘူး…
ေဖေဖ သမီး ဘုရားကို ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္ေတာ့မွ ထပ္မသြားခ်င္ေတာ့ဘူး ေဖေဖ သမီး ဘုရားကို ေနာက္တစ္ခါ ထပ္မသြားေတာ့ဘူးဘာျဖစ္လို႔လဲ သမီး ဘုရားကို သမီးသြားေတာ့ ေတြ႕တဲ့လူတိုင္းက ဘုရားဝတ္ျပဳေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ ဖုန္းသုံးေနတဲ့သူနဲ႔ အတင္းေျပာေနတဲ့သူနဲ႔ ဘယ္သူမွ တေလးတစား မရွိၾကဘူး သူတို႔အားလုံးဟာ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ ေဆာင္ေနၾကတာပဲ ေဖေဖ အင္း ဒါဆို သမီး ဘုရား မသြားေတာ့ဖို႔ မဆုံးျဖတ္ခင္ ေဖေဖ သမီးကို တစ္ခုေလာက္ […]
အင်းဝမှာရေ – အင်းဝမှာ ရေ ၊ မြေမှာ ပဲခူး ဟူသော စကားကို ရှေးလူကြီးများမှ တစ်ဆင့် ကြားဖူးကောင်း ကြားဖူးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရခြင်းမှာ အင်းဝသည် ရေကြီးခြင်း ၊မိုးခေါင်ခြင်း စသည့် ရေနှင့် ပတ်သတ်သော ဒုက္ခများကြောင့် မြို့ပါ ပျက်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုလို့ရသော ကြောင့် ပင်။ သက္ကရာဇ် ၁၇၄၁ ခုနှစ် မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိ လက် ထက်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည့် အဖြစ်များဖြစ်သည်။ ထိုမင်းသည် […]
ခင်များ အချိန်ရရင် ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင်ဖတ်သွားနော်….
ခင်များ အချိန်ရရင် ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင်ဖတ်သွားနော်…. တကယ်ဖြစ်သွားတာလေးပါ အဓိကပြောချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူကို ရှိနေတုံး တန်ဖိုးထားတက်ဖို့ပါပဲ သူမရှိတော့မှ ခင်များငိုနေရင် အလကားပဲ “မျက်ရည်ခိုင်မ ဖတ်ကြည့်ပါ ” ကောင်မလေး ။ ။ “ ငါ့မှာ ရောဂါရှိနေပြီတဲ့ ´´ ကောင်လေး ။ ။ “ ဘာမှမပြောပဲ ပြုံးနေတယ် ´´ ကောင်မလေး ။ ။ “ […]
ေပ်ာက္သြားတဲ့ဖုန္းကို ေကာက္ရသူက ကတ္လဲသုံးေနရင္ေတာင္ ဘယ္ေနရာမွာရွိတယ္ဆိုတာ သိႏိုင္တဲ့နည္း
ေပ်ာက္သြားတဲ့ဖုန္းကို ေကာက္ရသူက ကတ္လဲသုံးေနရင္ေတာင္ ဘယ္ေနရာမွာရွိတယ္ဆိုတာ သိနိုင္တဲ့နည္း ေပ်ာက္သြား တဲ့ ဖုန္း ကို ေကာက္ရသူက ကတ္လဲသုံးေနရင္ေတာင္ ဘယ္ေနရာမွာရွိတယ္ဆိုတာ သိနိုင္ပါၿပီ ေပ်ာက္သူမ်ားအတြက္ပါ ။ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဖုန္း ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့လၽွင္ ျပန္ရွာဖို႔ ခက္ခဲ မွာပါ ေကာက္ရသူကလဲ ဆင္းကဒ္ က အသုံးမဝင္ေပမဲ့ တန္ဘိုးရွိတဲ့ ဟန္းဆက္ကိုေတာ့ ျပန္မေပးပဲ ဆင္းကဒ္ လဲၿပီး အသုံးျပဳတတ္ ပါတယ္..။ အဲဒီလို အသုံးျပဳေနခဲ့လၽွင္ လူႀကီးမင္း […]